WFP Yobatsira Vagari vemuChinhoyi neMamwe Maguta neChikafu
Vamwe vagarii vemuChinhoyi nhasi vatenga zvekudya nerubatsiro rwemari kubva kusangano reWorld Food Program kana kuti WFP.
Sangano iri riri kubatsira vanhu vanosvika zviuru makumi maviri nezvitanhatu nemazana manomwe nemakumi mana kana kuti 26 740 kubva mumawadhi gumi mudhorobha reChinhoyi.
Mumwe afarira chirongwa ichi ndiAmai Getrude Nhokwara avo vanga vakaguguchira zvinhu zvekudya zvakaita sehupfu, mafuta ekubikisa nekuzora, shuga pamwe nesipo yekugezesa nekuwachisa muchitoro cheTM.
Vamwe vange vaine mufaro mukuru ndiAmai Ellen Gomo vanoti vanofarira chirongwa cheWFP nekuti mhuri yavo yange yoziya nenzara. Vatiwo chirongwa cheWFP hachina zvehuori kana kunyegedza vanhu zvinoitwa nevamwe.
Mumwe hwindi akarasikirwa nebasa rake munguva ino yechirwere cheCovid-19 asingadi kudomwa nezita anoti dai zvechikafu zvichiitwa nemasangano akaita seWFP chete kwete vezvemapato
ezvematongerwo enyika nekuti vanosarudzana vanozivana.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro muChinhoyi VaSylvester Chaitezvi vanoti vanotenda nezvaitwa neWFP iyo yakafamba mudzimba dzevanhu ichibvudzurudza vagarii nekunyora mazita vanhu vakasarudzwa pasina
Nekuda kwekujeka kwemasarudzirwo akaitwa vanhu, VaTaurai Tsilanzi vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera zviri kuitwa neWFP zvekunyora vanhu vari mudzimba kwete kuunganidza vanhu.
WFP iyo iri kushanda nesangano reLinkages for Economic Advancement of the Disadvantaged – LEAD-kupa vanhu mari dzekutenga zvekudya munguva ino yechirwere cheCovid-19 icho chiri kutadzisa vanhu kushanda kuti vazviriritire.
Munhu mumwechete ari kupihwa madhora gumi nemaviri uye vanotenga zvekudya izvi muzvitoro zveOK ne TM chete sezvo musingapere zvinhu zvichienzaniswa nezvimwe zvitoro.
Mari iyi inoiswa mumakadhi kuti itenge zvinhu zvinoita kuti munhu ararame zvakaita seUpfu, mafuta ekugeza nekuzora, shuga, sauti, sipo yekugeza nekuwacha, dovi, matemba, mbinzi pamwe nezvimwe zvinovaka muviri.
Zvinhu zvakaita sehwahwa nefodya hazvibvumirwe kutengwa nemari iyi.
WFP iyo yaimbopa zvekudya kumaruzevha chete yave kupinda mumadhorobha sezvo vanhu vanosvika mamiriyoni masere vari kuda ruyamuro rwezvekudya gore rino.
WFP iri kubatsirwao nemari yekubatsira mumadhorobha nehurumende yeAmerica kuburikida nebazi reUSAID.
Sangano iri rinoti huwandu hwevanhu vanoda chikafu mumadhorobha emuZimbabwe huri kutarisirwa kukwira kusvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3,3 million kubva pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2, 2 million.
Hurumende yeZimbabwe iri kutatarika kubatsira vanhu vasina zvekudya. Hurumende mavhiki apera yakabvisa mari yayaipa vanogaya chibage votengesa nemari iri pasi ichiti huori hwanyanya.
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnanagwa vakaudza vanhu kuManicaland kuti hurumende ichange yopawo varombo mari yekutenga zvekudya asi vanoona nezvehupfumi vanoti totenda maruva tadya chakata.